Maro ireo niditra hopitaly tetsy amin’ny HJRA : telo maty, an-jatony naratra vokatry ny ady | NewsMada
Maro ireo niditra hopitaly tetsy amin’ny HJRA : telo maty, an-jatony naratra vokatry ny ady
Ady, fahamamoana, lozam-pifamoivoizana no betsaka nitranga nandritra ny fetin’ny faran’ny taona sy ny fiandohan’ny taom-baovao. Nisy telo ny maty, ary betsaka ireo naratra vokatry ny adiadyy noho ny hamamoana.
Olona telo maty naterina teny amin’ny hopitaly HJRA, nandritra ny fety teo. Nisy tamin’ireo ny maty vokatry ny lozam-pifamoivoizana, ratra nitarika tany amin’ny fahafatesana. Vokatry ny ady andalam-be sy ny hamamoana ny ankamaroan’ny olona nentina teny amin’ny hopitaly HJRA nandritra ny fety teo, na ny 31 desambra alina, na ny 1 janoary 2016. Tanora avokoa ny betsaka ary niandahy niambavy mihitsy ireo nentina teny amin’ny hopitaly. Nahatratra 127 ny olona nentina teny amin’ny hopitaly nandritra ny fetin’ny faran’ny taona hatramin’ny omaly hariva, raha 42 ny isan’ny naratra vokatry ny ady nentina teny amin’ny HJRA ny 31 desambra tontolo ny andro sy alina. 11 tamin’ireo no tena voa mafy voatery naiditra hopitaly.
Nahatratra 15 ny isan’ny naratra vokatry ny lozam-pifamoivoizana nentina teny amin’ny HJRA raha ny 31 desambra fotsiny, izay nisy tamin’ny loza ny nahafatesana olona iray. 15 ny olona nentina teny amin’ny hopitaly tamin’ny karazan-javatra samihafa, toy ny fahamamoana diso tafahoatra, ny fahamoizampo sns. Araka ny fanazavana azo teny an-toerana, azo lazaina ho nihena ihany ny isan’ny naratra tonga teny amin’ny HJRA tamin’ity taona ity raha nitaha ny tamin’ny taon-dasa. Nahatratra 227 izany ny taona 2014, 285 ny taona 2015.
Lozam-pifamoivoizana nahafatesana zandary
Nandritra ny faran’ny taona teo ihany, nisy ihany koa ny lozam-pifamoivoizana izay nahafatesana zanday iray, tany Ambodimanga Anjozorobe. Tamin’ny 8 ora sy sasany alina, nidona tamin’ny fiara iray nijanona amoron-dalana ny môtô nentin’ity zandary GP2C miasa any an-toerana ity. Avy nanatitra ny ofisie iray izy io ka teny an-dalana niverina no tra-doza. Naratra mafy ilay zandary ary nentina teny amin’ny dokotera ary nahazo fitsaboana. Mbola nahavita tatitra tamin’ny kaomanda izy, ary nody avy eo. Tany an-trano anefa, tokony ho tamin’ny 12 ora alina, niharatsy ny toe-pahasalamany ary nentina niverina tamin’ny hopitaly. Maty teny an-dalana anefa izy io. Omaly voalohan’ny taona, nentina any amin’ny fihaviany any Andramasina ilay zandary.
Amin’ny ankapobeny, nilamina ny fetin’ny faran’ny taona sy ny voalohan’ny taona tany amin’ny lalam-pirenena. Tsy nahenoana akory aloha, raha ny omaly, ny lozam-pifamoivoizana amin’ireo lalam-pirenena ahitana loza matetika.